Shina Pet Collar mpamatsy sy mpanamboatra - Shenzhen TIZE Technology Co., ltd.
Ity vokatra ity dia volon-biby vita amin'ny tranokala nilonika nylon. Ny andraikiny dia ny miaro, mifehy ary manaraka ny traction.
Rehefa mitafy vozon-doha ny alika dia tandremo sao tsy hikotrana azy ireo be loatra, satria mafy loatra ny vozona ka maharary ilay alika rehefa mihazakazaka tampoka na mikoropaka am-pifaliana. Ny fehin-dàlana mety dia tokony hanana habaka ahafahan'ny tompony mametraka rantsan-tanana roa aorian'ny fitafy azy.
Shenzhen TIZE Technology Co, ltd dia mpamatsy china mpamatsy an'ny R&D, fanamboarana sy serivisy ho an'ny mpanjifa ho an'ny Pet Collar .Roa vola amin'ny fivarotam-bokatra ataonay sy manamboatra ny fonja vaovao indrindra, fancy Pet Collar, ​​hanome anao lafo vidy izahay.